Imikhiqizo Abakhiqizi & Abahlinzeki - Ukupakisha kweZiling
I-Liner Induction Yokushisa
Ingcindezi Seal ebucayi
I-3-Ply Foam Liner
Ukufakwa kokushisa okumbili-Se ...
Indwangu eyodwa Yokushisa Ukushisa Se ...
Easy Peel Aluminium Ucwecwe Ind ...
Ingcindezi ebucayi Seal Liner
I-liner yakhiwe ngezinto ze-foam ezifakwe ingcindezi yekhwalithi ephezulu ebucayi. Le liner ibizwa nangokuthi i-liner eyodwa. Inikeza uphawu oluqinile ngokunamathela esitsheni ngokucindezela kuphela. Ngaphandle kwamadivayisi wokuqinisa nokushisa. njenge-liner eshisayo yokunamathisela i-induction seal liner, iyatholakala kuzo zonke izinhlobo zeziqukathi: iziqukathi zepulasitiki, ingilazi nezensimbi. Kepha ayenzelwe izakhiwo zokuvimbela, imiphumela incane kuneyangaphambili, ngakho-ke kunconywa ukuthi kusetshenziselwe izimpahla eziqinile eziyimpuphu, njengokudla, imikhiqizo yezimonyo nemikhiqizo yezempilo.
Ingcezu eyodwa ye-Induction Seal Liner ene-Backing
Lesi yisiqephu esisodwa se-induction seal Liner, akukho backup noma ungqimba wesibili, singavalwa esitsheni ngomshini wokufaka we-induction noma i-iron kagesi ngqo. Inganikeza ngophawu oluqinile kupulasitiki noma iziqukathi zengilazi kungasuswa ngocezu lonke, futhi akukho okusalele odebeni lwesitsha.
I-Easy Peel Aluminium Foil Induction Seal Liner
I-foam liner iyi-liner yenhloso ejwayelekile, eyenziwe nge-foam polyethylene foam. Lokhu akudali uphawu, futhi kuvame ukusetshenziselwa ukuvimbela ukuvuza.
Ifomu le-Liner liyi-liner eyodwa, okubalulekile yi-EVA, i-EPE njll.
Ku-elastic yayo ithumela inkontileka kanye ne-container port.
Ifanele zonke izinhlobo zokufakwa uphawu kwesitsha, ingasebenzisa kaninginingi, kepha umphumela wophawu uvamile.
Ingasetshenziswa ngemuva futhi i-aluminium-plastic eyinhlanganisela yolwelwesi oluyinhlanganisela nomphumela wokubeka uphawu ungcono.
Izici eziyinhloko zothuli oluhlanzekile, azimunci umusi wamanzi, hhayi ngenxa yomswakama noma izinga lokushisa ukushintsha ukuzinza kwawo.
I-Liner eyodwa yokuqeshiswa kokushisa kwe-Heat ne-Inner PE Foam
I-Liner Yesibili Yokufakwa Kokushisa Okushisayo Nge "Isakhiwo"
Le liner yakhiwe ngoqweqwe lwe-aluminium foil nongqimba wesipele. Kudinga umshini wokufaka uphawu wokungeniswa. Ngemuva kokuthi umshini wokungenisa uhlinzeka nge-heat-seal laminate hermetically uphawu odebeni lwesitsha, ungqimba lwe-aluminium luvaleleke endebeni yesitsha bese ungqimba lwesibili (amakhadibhodi efomu) asele ekhepheni. I-liner yesibili njengoba i-reseal liner ishiywe ku-cap ngemuva kwenqubo yokushisa.
Izicucu ezimbili ze-Heat Induction Seal Liner nge-Paper Layer
Isimbozo seglue singenziwa isiqeshana esisodwa noma izingcezu ezimbili ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Kukhona isendlalelo sokuncibilika esishisayo esincibilikisiwe esigxotsheni sokubekwa uphawu kwelender aluminium seal. Ngemuva kwenqubo yokushisa ngomshini wokufaka we-induction noma insimbi kagesi, ungqimba lokunamathisela luzovalwa odongeni lwesitsha. Le liner yohlobo iyatholakala kuzo zonke izinhlobo zezinto ezibonakalayo., Ikakhulukazi esitsheni seglasi, kepha imiphumela ayingcono kune-induction seal liner.
IShanghai Ziling Packaging Co., Ltd.
Ucingo: (021) -5819-6620